AUKEY Oo Soo Bandhigtay Shan Roodar Oo Si Rasmi Ah Loogu Ogaaday | Androidsis
Eder Ferreno | | Noticias, Qalabka kale
'AUKEY' waa mid ka mid ah noocyada ugu caansan ee loo yaqaan 'chargers' ama baytariyada. Shirkaddu waxay leedahay xeedho badan oo kala duwan, oo loogu talagalay inay waxtar badan yeeshaan oo nolosheenna wax yar ka fudud. Hadda waxay nooga tageen noocyo cusub oo fiilooyin xeel dheer, oo loogu talagalay in lagu isticmaalo mobilo ama laptop.
Wadarta shan xeedho oo cusub ayaa nagu sugaya qaybtan AUKEY. Soo socda waxaan dhamaantiin kaaga sheegeynaa shantan nooc. Si aad wax uga ogaan kartid wax walba oo iyaga ku saabsan, oo aan hadda si rasmi ah u iibsan karno, oo aan u helno midka ku habboon waxa aad raadineyso.
Dhammaan xeedhooyinka ku jira qaddarkan adeegso tikniyoolajiyadda Dynamic Detect. Waad ku mahadsan tahay, waxaa la ogaadaa marka uu jiro qalab ku xiran ama marka ay jiraan labo, si markaa awooda xeedho loogu kala qeybiyo labadooda, taasoo u oggolaaneysa in si hufan wax loogu dallaco, laakiin u oggolaanaya labadaba in mar walba la soo dalaco.
Ugu horreyntii xeedho darbiga noocan ah ayaa na sugaya, taasi waxay noo ogolaaneysaa culeys dhan 30W. Sidaas darteed haddii aad haysato taleefan leh taageeradan, waxay kuu oggolaaneysaa inaad ku soo dallacdo muddo gaaban. Xeedho Tani waxay leedahay iyadoo la adeegsanayo Power Delivery 3.0 iyo soosaarka caadiga ah ee USB-ka si loogu dalaco qalabkaaga USB-C iyo USB. Intaa waxaa dheer, waxaan isticmaali karnaa labada dekedood isla waqtigaas, oo u oggolaaneyna xitaa kiiskan in qalab lagu soo oogay 18W.
Sidaa darteed, waxaan ku raaxeysan karnaa lacag-bixin deg deg ah oo hufan oo leh xeedho AUKEY ah. Waxay ku habboon tahay xulasho ballaaran oo taleefannada gacanta ah, illaa iyo inta ay haystaan ​​USB-C ama USB. Maxaa intaa ka badan, waa khafiif ah, iftiin iyo xeedho is haysta, in aan ku isticmaali karno guriga, laakiin sidoo kale aan ku qaadano fasax waqti kasta.
Charger-kan labaad wuxuu la mid yahay moodelkii hore ee aan soo aragnay. Wuxuu la yimaadaa laba dekedood oo USB-C ah, taas oo noo oggolaan doonta inaan ka qaadno dhammaan noocyada aaladaha, sida taleefannada, iyo sidoo kale inaan la jaan qaadi karno taleefano aad u tiro badan, laga bilaabo moodooyinka Android illaa moodooyinka iPhone. Xaaladdan oo kale, xeedhoku wuxuu na siinayaa awood dhan 36W.
Laakiin sidoo kale waxaan ka qaadi karnaa laba qalab isla waqti isku mid ah, taas oo ka dhigi doonta awoodda 18W kiiskan. Weli waa ikhtiyaar weyn in si dhakhso leh qalab looga qaado. Marka waa xeedho in dareenkan uu mudan yahay. Intaas waxaa sii dheer, maadaama ay cabir yartahay miisaankiisuna yaryahay, markasta waan qaadan karnaa, ama ha shaqeyso ama safar ha ahaato.
Ikhtiyaar kale oo wanaagsan oo kujira xeedho xeedho AUKEY, oo aan awoodno Wax alaab ah lama helin..
Xeedho saddexaad ee qaybtan cusub ka socota AUKEY waa awood badan Xeedho USB la USB caadiga ah iyo Power Delivery 3.0 saarka. Loogu talo galay in lagu soo dallaco qalabkaaga USB-C iyo USB si hufan. Waad ku mahadsan tahay, waxaan heli karnaa lacag 60W ah, oo loo isticmaali karo dekedda USB-C marwalba isla markaana qalabka si dhakhso leh ugu soo dallacno sidan. Haddii aan rabno inaan adeegsanno laba qalab isla waqti isku mid ah, waan ka faa'iideysan karnaa 45W ee Bixinta Awoodda marka aad isticmaaleyso labada dekedoodba isla waqtigaas.
Sida kuwa kale ee xeedho ku jira noocyadan, waa a is haysta, miisaan fudud oo aad u fudud in lagu isticmaalo moodel. Sidaa darteed, marwalba waan la tagi karnaa meesha aan rabno. Intaas waxaa sii dheer, xeedho this Waxay leedahay isku xira isku laaban aaladda lagu daro iyo qaadista. Faa'iido u leh lacag-bixinta guriga, xafiiska iyo meel kasta.
Xeedho afaraad oo ku jira xaddigaas AUKEY ayaa u taagan isticmaal ka mid ah tikniyoolajiyadda GaN ee horumarsan. Waad ku mahadsan tahay, lacag aad u dhakhso badan ayaa la heli karaa, taas oo aan uga faa'iideysan karno moodellada sida MacBook Pro, iPhone XS, XS Max, XR, Nintendo Switch, ama aalado kale oo USB-C ah oo la jaan qaada oo taageera amarka USB-ga.
Mid ka mid ah faa'iidooyinka ay leedahay waa inay noo oggolaaneyso inaan ka faa'iideysano lacagtan runta ah ee degdegga ah, 60W, laakiin iyadoon cabirkeedu ka weyneyn. Maaddaama ay hayso naqshad aad u kooban, taas oo ka dhigaysa mid raaxo leh. Waxaad ku qaadan kartaa shaashadda laptop-ka ama boorsada dhabarka. Intaas waxaa sii dheer, waxaa loo qaabeeyey hab ka ilaaliya aaladaha inay sawir aad u tiro badan sameeyaan ama looga hortago kuleylka.
Qaabkan ayaa leh oo sida caadiga ah lagu qiimeeyo 42,99 euro. Inkasta oo si kumeelgaar ah looga iibsan karo Amazon kaliya 34,99 euro, Wax alaab ah lama helin..
Ugu dambeyntiina waxaan helnaa a nooca ugu muhiimsan ee noocan ah AUKEY. Xeedho wuxuu leeyahay awood ah 60W, sidoo kale wuxuu leeyahay laba dekedo USB-C ah. Markaa waxaan ka qaadi karnaa laba aaladood oo is waafajin kara isla waqti isku mid ah, ha noqdaan taleefannada ama laptop-yada. Waa xeedho awood leh oo kuu oggolaan doonta inaad laba qalab isku mar ka qaadatid, waxayna xitaa noqon kartaa laptop iyo taleefan gacmeed isla waqti isku mid ah.
In kasta oo ay awood weyn leedahay, wuxuu hayaa naqshadeynta isafgaradka ee aan ku aragno qaddarkan ee alaabta sumadaha. Waxaan kula qaadan karnaa safar ama fasax qaab aad u fudud. Xeedho sidoo kale waxaa loo qaabeeyey hab aan kululeyn doonin aaladda aad ku amreyso ama ka hor istaageysa inay hesho waqti aad u badan.
Xeedho Tani waxaa lagu iibsan karaa qiimo dhan 59,99 euro on Amazon, Wax alaab ah lama helin..
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Qalabka kale » AUKEY waxay soo bandhigeysaa shan xeedho oo xeel dheer oo mobilada iyo laptop-ka ah